Marriage proposal - Zvese zvaunoda kushandisa kune zuva guru | Bezzia
Pemberera chikumbiro chako muchimiro!
Susana godoy | 13/01/2022 16:00 | Muchato
Kupemberera muchato wako ndeimwe yetsika huru ichiri kuteverwa nhasi. Kunyangwe ichokwadi kuti protocol haisisiri yakafanana neyakare. Uye zvakare, zvichagara zviri zvekufarirwa nevaviri, asi kunyangwe zvakadaro, isu tinokupa akateedzana mazano kuitira kuti iwe ugone kuronga nguva ye chirevo chako zvakadzama.
Nokuti patinozivisa nezvemuchato wedu, pane nguva dzose dzinokosha zvikuru uye kwete dzose dzinowira pazuva guru. Ndokusaka tichigona kunakidzwa nevanhu vedu rimwe nerimwe renhanho dzatiri kutora. Matanho anofara ayo atinogara tichida kugovera uye ndosaka chikumbiro chako chaisazosiiwa.
1 Chii chiri kurudziro yeruoko
2 Chii chinoitwa muchirongwa
3 Chii chokupa vaviri ava
4 Inguva yakadii isati yaitwa pamberi pemuchato
Chii chiri kurudziro yeruoko
Dzimwe nguva tinogona kuwana nyonganyonga nechikumbiro uye nguva yekukumbira muchato. Ichokwadi kuti murume nomudzimai vane mamwe mazano uye ndiwo avanofanira kuita, nokuti hakuchina hurongwa semazuva ekare. Kutanga kubva pane izvi, ichokwadi kuti kukumbira muchato inguva chaiyo apo chikamu chevaviri chinozvizivisa uye chinoita icho chakakosha chirevo. Asi chikumbiro cheruoko ndeimwe nguva yekupemberera, yekusangana nevadikani umo chikumbiro chinopembererwa. Kare kare zvaive zvakaoma nekuti chikomba ndicho chaigara chichikumbira ‘mvumo’ kuna baba vemuroora kuti vakwanise kuroora. Ikoko mhuri dzakava neshoko rokupedzisira. Nhasi zvinhu zvese zvachinja kuita zvirinani!
Chii chinoitwa muchirongwa
Zvatove pachena kwatiri kuti ipati, kunyange idiki pane muchato. Vabereki chete, vanin'ina kana mhuri yepedyo Ndiye achauya kwaari. Naizvozvo, iwe unogona kugara uchichengeta paresitorendi yakanaka kana kugadzirira mabiko epamba ayo vaenzi vanozofarirawo. Uyu musangano uye izvi hazvifaniri kunge zviri pedyo nemuchato pachawo, kupfuura chero chinhu kuitira kuti zvitipe nguva yekuronga imwe uye imwe pasina dambudziko. Paunenge uine nzvimbo yacho, unogona kuishongedza nenzira iri nyore uye ine rudo, nemaruva nemavhasi echiitiko chacho. Nenzira imwecheteyo, iwe unogona kusarudza imwe yakasiyana menyu, inogara ichisangana nezvinodiwa zveimwe neimwe diner. Kunze kwekudya kwemasikati kana kudya kwemanheru, panewo kuchinjana kwezvipo pakati pevakaroorana.
Chii chokupa vaviri ava
Isu tinotoziva kuti panguva yekukumbira muchato ring ndiye anenge aripo. Naizvozvo, panguva ino tinogona kusiya dzimwe sarudzo. Somuenzaniso, kwaari zvinogona kuva wachi yekare kana smartwatch, mamwe cufflinks, imwe mhando yechinhu chaanounganidza, nezvimwewo. Nepo kwaari iwe unogonawo kusarudza zvishongo mumhando yezvishongo, mutsipa kana choker uye kunyange mhete. Asi pamwe zvimwe zvekushandisa sebhandi rakanaka kana kunyange shangu zvinogona kukushamisa iwe. Iwe unogona kusvetuka ese protocol uye wosarudza zano rinomushamisa!
Inguva yakadii isati yaitwa pamberi pemuchato
Tisati tataura kuti yakanga isiri pedyo zvakanyanya nemuchato, kana iwe uchida kuita chimwe chinhu chepakutanga uye une zvakawanda zvokuronga. Asi kutaura zvakafarakana zvimwe zvinokurudzirwa ndezvekuti mwedzi mina kana 4 ipfuure kubva pachikumbiro kuenda kumuchato. Ichokwadi kuti dzimwe nguva inova yakaparadzana zvakanyanya kana kuti zvakapesana. Nokuti zvichaenderana nevakaroorana. Kunyangwe vazhinji vavo havachasarudze paiyi pfungwa uye kunyangwe paine chikumbiro chemuchato vanoenda zvakananga kumuchato. Unoda here kuti chikumbiro chako chive muchimiro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Muchato » Pemberera chikumbiro chako muchimiro!
5 mishonga yechisikigo yekurapa stretch marks
Chii chinonzi surimi uye inogadzirwa nei?